OTU ESI ABANYE NA YOUTUBE: IDOZI NSOGBU NA-EGBU OSISI - YOUTUBE - 2019
Troubleshoot Akaụntụ Nbanye akaụntụ YouTube
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nwere nsogbu dị iche iche mgbe ha na-agbalị ịbanye na akaụntụ YouTube. Nsogbu dị otú ahụ nwere ike ịpụta na ọnọdụ dị iche iche. E nwere ọtụtụ ụzọ isi weghachite akaụntụ gị. Ka anyị lee anya na nke ọ bụla n'ime ha.
Enweghị m ike ịbanye na YouTube
Ọtụtụ mgbe karịa, nsogbu ndị ahụ metụtara onye ọrụ ahụ, ọ bụghị ịdaba na saịtị ahụ. Ya mere, nsogbu ahụ agaghị edozi onwe ya. Ọ dị mkpa iji wepụ ya ka ị ghara ịmalite ime ihe dị egwu ma ghara ịmepụta profaịlụ ọhụrụ.
Ihe kpatara ya 1: paswọọdụ ezighi ezi
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na profaịlụ gị n'ihi na ị chefuola paswọọdụ gị ma ọ bụ usoro ahụ gosiri na paswọọdụ ezighi ezi, ịkwesịrị iweghachi ya. Ma buru ụzọ hụ na ị banyere ihe niile n'ụzọ ziri ezi. Hụ na igodo CapsLock anaghị ejigide ma ị na-eji nhazi asụsụ ị chọrọ. Ọ ga-adị ka ịkọwa nke a bụ ịkwa emo, ma ọtụtụ mgbe nsogbu ahụ bụ njedebe nke onye ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nyochala ihe niile ma nsogbu ahụ edozighị, wee soro ntuziaka iji tọgharịa paswọọdụ gị:
Mgbe ị banyere email na paswọọdụ paswọọdụ, pịa "Chefuola paswọọdụ gị?".
Ọzọ ịkwesịrị ịbanye paswọọdụ ị na-echeta.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike icheta paswọọdụ ị ji abanye na, pịa "Ajụjụ ọzọ".
Ị nwere ike ịgbanwe ajụjụ a ruo mgbe ịchọtara otu ị nwere ike ịza. Mgbe ị banyere nzaghachi ahụ, ị ​​ga-agbaso ntuziaka ndị saịtị ahụ na-enye iji nwetaghachi akaụntụ gị.
Ebumnuche 2: Ndenye adreesị email adighi
Ọ na-eme na ozi dị mkpa na-agbapụ isi m ma ghara icheta. Ọ bụrụ na ọ mere na ị chefuru adreesị ozi-e ahụ, ịkwesịrị ịgbaso ntuziaka ahụ kpọmkwem dị ka nke mbụ:
Na ibe ebe i choro iduzi ozi-e, pịa "Chefuola adreesị ozi-e gị?".
Tinye adreesị ndabere ị nyere mgbe ịdenyere aha, ma ọ bụ nọmba ekwentị nke edere aha.
Tinye aha na aha nna, nke e kwuru mgbe ị debanyere adres.
Na-esote, ịkwesịrị ịlele mail ma ọ bụ ekwentị, ebe ozi ga-abịa na ntuziaka maka imekwu ihe.
Ebumnuche nke 3: Echefuola Akaụntụ
Ọtụtụ mgbe, ndị mmegide na-eji profaịlụ onye ọzọ maka abamuru ha, na-ama ha egwu. Ha nwere ike ịgbanwe ozi nbanye ka ị ghara ịbanye na profaịlụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eche na onye ọzọ na-eji akaụntụ gị ma eleghị anya ọ bụ onye gbanwere data, mgbe ị na - enweghị ike ịbanye, ịkwesịrị iji ntụziaka ndị a:
Gaa na etiti nkwado ọrụ.
Akaụntụ Onye Nkwado
Tinye nọmba ekwentị gị ma ọ bụ adreesị ozi-e.
Zaa otu n'ime ajụjụ ndị a tụrụ aro.
Pịa "Gbanwee Paswọdu" ma tinye otu nke a na-ejighi eji na akaụntụ a. Echefula na paswọọdụ ekwesịghị ịdị mfe.
Ugbu a ị nwere profaịlụ gị ọzọ, na scammer nke jikwa ya mee agaghịzi enwe ike ịbanye. Ma ọ bụrụ na ọ nọgidere na usoro ahụ mgbe ọ gbanwere paswọọdụ ahụ, a ga-achụpụ ya ozugbo.
Ebumnuche 4: Nsogbu na ihe nchọgharị
Ọ bụrụ na ịga na YouTube site na kọmpụta, ikekwe nsogbu ahụ dị na ihe nchọgharị gị. O nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Gbalịa ibudata ihe nchọgharị Ịntanetị ọhụrụ ma banye n'ime ya.
Ebumnuche 5: Akaụntụ ochie
Kpebiri ilele ọwa ahụ na-eletaghị ruo ogologo oge, ma enweghị ike ịbanye? Ọ bụrụ na e kere ọwa ahụ tupu May 2009, mgbe ahụ nsogbu nwere ike ibili. Eziokwu ahụ bụ na profaịlụ gị dị agadi ma ị jiri aha njirimara YouTube ịbanye. Ma usoro agbanweela ogologo oge gara aga ma ugbu a, anyị chọrọ njikọ na email. Ị nwere ike weghachite ohere dịka ndị a:
Gaa na ibe nbanye Google. Ọ bụrụ na ịnweghị ya, ị ga-ebu ụzọ kee ya. Debanye n'ime mail site na iji data gị.
Hụkwa: Mepụta Google akaụntụ
Soro njikọ "www.youtube.com/gaia_link"
Tinye aha njirimara na okwuntughe nke i jiribu abanye na ma pịa "Kwuo ikikere ikike".
Ugbu a ị nwere ike ịbanye na YouTube na iji Google Mail.
Ndị a bụ ụzọ bụ isi isi dozie nsogbu site na itinye profaịlụ na YouTube. Chọọ maka nsogbu gị ma gbalịa dozie ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na isoro ntuziaka ahụ.